काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का लागि ९ जना विज्ञहरूको आवेदन परेको छ । आवेदन दिने फागुन २० गते अन्तिम दिनसम्म उक्त आवेदन परेको हो ।
एचआइडिसिएलले गत फागुन ५ गते रिक्त पदका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूबाट १५ दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । सिइओ छविराज पोखरेलको ४ वर्षे कार्यकाल गत माघ चौथो साता पूरा भएपछि अर्को कार्यकालका लागि आवेदन मागिएको छ । हाल संस्थामा वरिष्ठताको आधारमा उपमहाप्रबन्धक मुक्तिबोध न्यौपानेले निमित्त सिइओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
आवेदन दिनेहरूमा पूर्व सिइओ छबिराज पोखरेल, संस्थाकै प्राविधिक विभागका उपमहाप्रबन्धक अरुण रजौरिया, रामहरि ढकाल, सुरज लामिछाने, डा. भेषराज थापा, विनोद देवकोटा छन् । यस्तै, अन्य आवेदकमा रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको संयोजक रहेका सूर्यप्रसाद अधिकारी, अर्जुन गौतम र सुधिर ज्ञवाली छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एचआइडिसिएलको नेतृत्व हाँक्न अधिकांशको योग्यता र क्षमता कमजोर देखिन्छ । ढकाल विभिन्न ठाउँमा छोटो अवधि काम गर्दै छोड्दै हिँड्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् भने थापा कृषि इन्जिनियरिङ पढेका व्यक्ति हुन् । कृषि पढेको व्यक्तिले जलविद्युत् क्षेत्र हाँक्न खोज्नुलाई गज्जबको रहर मान्नुपर्छ । उता देवकोटासँग पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव देखिँदैन ।
सुरज लामिछाने यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक थिए । त्यहाँ रहँदा उनी केही ठेक्कापट्टाको काममा विवादित पनि भएका थिए । उनी हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्यापन गराउँछन् । यो बाहेक जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेको उनको अनुभव भेटिँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएका ज्ञवाली एचआइडिसिएलकै पूर्वसञ्चालक हुन् भने गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रबन्धक हुन् । कोषमा कार्यरतबाहेक गौतमसँग वित्तीय र जलविद्युत् दुवै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव देखिँदैन ।
निजी जलविद्युत् क्षेत्रबाट आवेदन दिएका अधिकारी यही क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि उनमा नेतृत्व हाँक्ने क्षमता र कुशलता देखिँदैन । बागलुङमा १.५ मेगावाटको ठेउले खोला निर्माण गरेका यिनले पछिल्लो समय हाइड्रोलोजीका कारण लक्षित ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकेका १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका छन् ।
क्षेत्रगत विधामा निकै राम्रो दख्खल रहेका अधिकारी सानो र सीमित स्वार्थका व्यक्तिको घेराभित्र रमाउने अनुहारका रूपमा चिनिन्छन् । यो घेरा तोड्न सके पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा प्राविधिक दृष्टिकोणले योग्य अरू व्यक्ति देखिँदैन । तर, साँधुरो सोचाइ र चाँडै आक्रोसित हुने प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायमै उनको चरित्रको आलोचना हुने गर्छ ।
अब एचआइडिसिएल हाँक्न सक्ने योग्य अनुहारमा पोखरेल, न्यौपाने र रजौरिया नै हुन् । तर, योग्यता नपुगेको भन्दै न्यौपानेले आवेदन दिएका छैनन् । बाँकी रहे पोखरेल र रजौरिया । पोखरेल हाल नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन (एनइए) का महासचिव पनि हुन् । उनी शैक्षिक तथा व्यावसायिकसँगै राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति हुन् ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा एचआइडिसिएलको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका पोखरेलका लागि अहिलेको राजनीतिक समिकरण भने त्यति सुखद देखिएको छैन । उनी पूर्वमाओवादी खेमाको भए पनि नरम स्वभाव र जिम्मेवारीमा खटेर काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् । राजनीतिक समिकरणलाई चित्त बुझाउन सके एचआइडिसिएलमा पोखरेलको सम्भावना पक्का देखिन्छ ।
सरकारले संस्थामा व्यावसायिक र क्षेत्रगत विधामा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने हो भने अरुण रजौरिया सबैभन्दा उपयुक्त पात्र मानिन्छन् । २० वर्षभन्दा बढी निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेर उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । निजी क्षेत्रमा पनि उनी योग्य, निष्ठावान र क्षमतावान इन्जिनियरका रूपमा परिचित छन् ।
नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट जलविद्युत् विकासमा एमएससी गरेका रजौरिया भारतको सरदार बल्लभ भाइ रिजनल कलेज अफ इन्जिनियरिका बिई गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन् । उनले लामो समय भारतीय कम्पनी जिएमआर र इसार पावर लिमिटेडमा काम गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : एचआइडिसिएलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन खुल्यो, को-को होलान् प्रतिस्पर्धी ?
नेपालभित्रै हिमाल पावर एन्ड जेनेरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि रजौरियाले साढे दुई वर्ष काम गरेका थिए । उनीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा संलग्न रहेर ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन, निर्माण, योजना र वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । यो सँगै प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माणमा समेत उनको योगदान देखिन्छ ।
हरेक क्षेत्र तथा संस्थामा राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दै आएको केपी शर्मा ओलीको सरकारले एचआइडिसिएलमा कस्तो अनुहार ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको समेत स्वार्थ हुने हुँदा उनले आफ्नो कार्यकालमा परिणाम देखाउन पनि एचआइडिसिएलमा योग्य, क्षमतावान र व्यावसायिक व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ ।
सिइओका लागि योग्यता
इटहरीमा ५ दिन दिउँसो विद्युत नआउने, बालाजुका ३ फिडर ४ घन्टा अवरुद्ध